China YASKAWA ephethe ngobuchule irobhothi MOTOMAN-GP35L mveliso kunye nabenzi | Jiesheng
Inkqubo ye- I-YASKAWA ephethe ngobuchule i-robot MOTOMAN-GP35L inomthamo omkhulu wokuthwala umthwalo wama-35Kg kunye nobude obude bobude obungama-2538mm. Xa kuthelekiswa neemodeli ezifanayo, inengalo eyongezelelekileyo kwaye iyayandisa uluhlu lwesicelo sayo. Ungayisebenzisa ukuhambisa, ukuthatha / ukupakisha, ukuhambisa iipalletizing, indibano / ukuhanjiswa, njl.
Ubunzima bomzimba we ukuphatha ngobuchule irobhothi MOTOMAN-GP35L Ngaba i-600Kg, inqanaba lokukhusela umzimba lamkela umgangatho we-IP54, ibakala lokhuselo lwe-axis yesihlahla yi-IP67, kwaye inesakhiwo esiqinileyo sokuchasana. Iindlela zokuhlohla zibandakanya ukunyuka komgangatho, ukujongela phantsi, ukunyuka ngodonga, kunye nokuthambekela, okunokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zabathengi.
6 35Kg Ubungakanani: ± 0.07mm
600Kg 4.5kVA 180 ° / umzuzwana 140 ° / umzuzwana
178 ° / umzuzwana 250 ° / umzuzwana 250 ° / umzuzwana 360 ° / umzuzwana
Inani leentambo phakathi kwe- IMOTOMAN-GP35L yokuphatha ngobuchule iirobhothi kunye nekhabhathi yolawulo iyancitshiswa, ephucula ukugcinwa ngelixa ibonelela ngezixhobo ezilula, ezinciphisa kakhulu ixesha lokusebenza kwemisebenzi yokutshintsha ikhebula. Uyilo lokunciphisa uphazamiseko luvumela ukubekwa koxinano oluphezulu lweerobhothi, kunye nengalo ephezulu ehlaziyiweyo ivumela ukufikelela ngokulula kwiindawo ezomileyo. I-eriyali eyandisiweyo inokulungelelanisa uluhlu lweerobhothi, kwaye intshukumo ebanzi yesihlahla ishenxisa ithuba lokuphazamiseka, ngokwenjenje inyusa ukuguquguquka kwesicelo. Izikhundla ezininzi zokufakelwa kwezixhobo kunye neenzwa ziququzelela ukudityaniswa ngokulula ukuhlangabezana neemfuno ezizodwa zeprojekthi.
Egqithileyo Ukuphathwa kweYaskawa ngeRobot Motoman-Gp25
Okulandelayo: I-YASKAWA MOTOMAN-GP50 iyalayisha kunye nokothula iirobhothi
Ukuphatha ingalo yeRobot, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo,